Kuwii hore ka daran | allsanaag
Kuwii hore ka daran
Wasiirkii maaliyadda Ciise Maxamuud, wasiirkii arimaa gudaha Cumar Maxamuud, wasiirkii amniga Cali Saleebaan , wasiirka shidaalka Cismaan Maxamuud, Qorshaynta Biciidyahan iyo Kheyradka badda Siwaaqroon. Xildhibanada Dhulbaante iyo Warsangeli waxa laga sugayaa inay ansixiyaan Boqortooyadan Majeerteen.
Markii Dhulbaante hayeen wasiirka wasaaradda arimaha Gudaha, arimaha gudaha qura ayeey hayeen, hadda Beesha Cumrar Maxamuud markii ay qabteen waxa ugu darsamay Federaalka iyo Demoqraadiyadda. 17 Xildhibaan ee ugu horeya oo ansixin doonana wasieadan Deni u magcaabay beeshiisa waxay ka soo jeedi doonaan gobolada Sool iyo Sanaag
Xilalka beesha Majeerteen ee Puntland
2 W asaaradda Maaliyada
3 Wadaaradda Arimaha Gudaha
4 Wasaaradda Amniga
5 Wasaaradda Qorsheynta
6 Wasaaeadda khayraadka Badda
7 Taliyaha Daraawiishta
8 Taliyaha Booliiska
9 Taliyaha Ciidama Bada
10 Taliyaha Nabad sugida
11 Taliyaha PSF
12 Taliyaha Pmf
Golaha Wasiirka dhanka ka raran
1- Cawil Sh. Xaamud – Wasiirka Cadaaladda iyo arimaha diinta
2 – Maxamed Cabdiraxman dhabancad – Wasiirka Arimaha Gudaha, Fedraalka iyo dimuqraadiyadda
3 – Cabdisamad Maxamed gallan – Wasiirka Amniga.
4 – Xasan Shire Abgaal – Wasiirka Maaliyadda
5 – Cabdiqafar cilmi xaange – Wasiirka Qorsheynta iyo Hormarinta dhaqaalaha.
6 – Cabdulahi maxamed xasan – Wasiirka Waxbarashada
7 – Jaamac faarax xasan – Wasiirka Caafimadka.
8 – Axmed bashiir muuse – Wasiirka Howlaha Guud
9 – Maxamed cabdi Cismaan – Wasiirka Dekedaha
10 – xuseen cismaan gabiley – Wasiirka Howlaha Guud & Garoomada.
11 – Aamino cismaan xaaji jaamac – Wasiirka Haweenka.
12 – Cali xasan axmed sabaarey – Wasiirka Warfaafinta.
13 – siciid Cisman aadan fiisigis – Wasiirka Xanaanada Xoolaha.
14 – Ismaaciil diiriye gamadiid – Wasiirka deegaanka
15 – Cabdulahi cabdi xirsi -Wasiirka Ganacsiga.
16 – Faarax maxamud cawash – Wasiirka Kaluumeysiga.
17 – Jaamac faarax muuse – Wasiirka Shaqada, Shaqalaha, Dhalinyarada iyo Ciyaaraha
18 – Axmed maxamed yusuf taaraan – Wasiirka Tamarta, Macdanta iyo biyaha.
Dawladda Cabdul Ra’uuf uu soo magcaabayo
← Xanaanada xoolaha ma dhaxal baa loo helay YAA KAA YEELAYA →
One thought on “Kuwii hore ka daran”
Abdul February 10, 2019 at 7:21 pm
Reer sanagow hadii aqoontiini iyo dalmarnimadii aad kuga faaidaywayden dalkina iyo dadkina in la la idin bahdilaa waa dow. Somalidu waxay tirahda nin tashan wayey waa loo talin. Mar hadii aad isku raaci wayden talo iyo tussle waa la idin fadsiin.
Intaasi waa iga guubabo ee tashada. Hadii kale joogiya hadalka iyo hadaaqa noqdana qoon la maamulo khayradkodana la ibsado koob shahana laga siin.